Inqwaba Eshajayo, I-China Eshaja Inqwaba Abakhiqizi, Abahlinzeki, Imboni - HNAC Technology Co., Ltd
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Ukushaja Inqwaba
Umsebenzi wenqwaba yokushaja ufana ne-gas dispenser esiteshini segesi. Ingalungiswa phansi noma odongeni futhi ifakwe ezakhiweni zomphakathi (izakhiwo zomphakathi, izitolo ezinkulu, izindawo zokupaka zomphakathi, njll.) kanye nezindawo zokuhlala ezindaweni zokupaka noma iziteshi zokushaja. Ingasuselwa kumazinga ahlukene kagesi ngokushaja izinhlobo ezahlukene zezimoto zikagesi. Isiphetho sokufaka senqwaba yokushaja sixhunywe ngokuqondile kugridi ye-AC, futhi isiphetho esiphumayo sifakwe ipulaki yokushaja yokushaja izimoto zikagesi.
I-HNAC ihlinzeka ngezinhlobo ezintathu zemikhiqizo: Inqwaba yokushaja ye-AC&DC Edidiyelwe, inqwaba yokushaja i-AC kanye nemikhiqizo yenqwaba yokushaja ye-DC. Izinqwaba zokushaja ngokuvamile zinikeza izindlela ezimbili zokushaja: ukushaja okuvamile nokushaja ngokushesha. Abantu bangasebenzisa ikhadi elithile lokushaja ukuze baswayiphe ikhadi kusixhumi esibonakalayo sokusebenzisana nekhompuyutha yomuntu ehlinzekwa yinqwaba yokushaja ukuze benze imisebenzi efana nendlela yokushaja ehambisanayo, isikhathi sokushaja, kanye nokuphrinta idatha yezindleko. Isikrini sokubonisa inqwaba yokushaja singabonisa idatha efana nomthamo wokushaja, izindleko, nesikhathi sokushaja.
Izici zomkhiqizo wezinqwaba zokushaja:
1. Ukonga amandla nokusebenza kahle okuphezulu: Ngezingxenye zekhwalithi ephezulu nokuthuthukiswa okuqhubekayo komklamo wepharamitha, kanye ne-algorithm yokulawula ethuthukisiwe, ukusebenza kahle kokuguqulwa kuphezulu njengokungu-97%, kunciphisa isikhathi sokushaja nokulahlekelwa kokushaja, ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi, nokudala izinzuzo eziphezulu. kumakhasimende;
2. Iphephile futhi inokwethenjelwa: Ngokufaka ngaphezulu / ngaphansi kwe-voltage, ukuphuma kwe-voltage / over-current, izinga lokushisa elingaphezulu, ukuvuza, ukuvikela umbani kanye neminye imisebenzi yokuvikela, okukhipha ngaphansi kwe-alamu ye-voltage, kuqinisekisa ukuphepha kwemikhiqizo kanye nabasebenzisi kukho konke- indlela eyindilinga;
3. Ukuzinza okuphezulu: Imojula yokushaja inobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi, futhi yaphumelela ukuhlolwa okuqinile kokwethembeka kanye nokuhlolwa kwemvelo okwedlulele ngaphambi kokulethwa; imojula eyodwa enqwabeni izohlukaniswa ngokuzenzakalelayo ohlelweni ngemuva kokuhluleka, okungaphazamisi umsebenzi wonke wesistimu;
4. Ubukhulu obuncane, ukusebenza kancane komhlaba: Ngokuminyana kwamandla aphezulu kakhulu futhi uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezici zobukhulu obuncane, ukuhlala kancane komhlaba, okonga izinto ezisetshenziswayo kanye nokusetshenziswa komhlaba futhi kunciphise ukutshalwa kwezimali kusenesikhathi;
5. Ukuvumelana nezimo kwemvelo okuqinile: -30 ℃-65 ℃ izinga lokushisa elisebenzayo, izinga lokuvikela le-IP54, kulula ukubhekana nesimo sezulu nesimo sezulu esihlukile.
Ijeneretha ye-AC enezigaba ezintathu